Funda i-2 yoRhwebo lweMT4 Khuphela iNkonzo yokuRhweba ngeSiginali yokuQala-Funda ukuRhweba
Funda iiNkonzo ezi-2 zoRhwebo lweKopi yokuRhweba ngeSignal Start
I-MetaTrader4 (MT4) lelona qonga lokurhweba lifunwa kakhulu kwindawo ye-forex yomhlaba - ubuncinci kuba iza nezixhobo eziphambili kunye neempawu ezikunika elona thuba lihle lokuqikelela kwimarike. Oku kugubungela yonke into ukusuka kwizalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zokuzoba itshathi kwii-simulators kunye neendidi zoku-odola ngokwesiko.
Nangona kunjalo, ukuba awunalwazi kubugcisa bohlalutyo lobuchwephesha- ukurhweba nge-forex ngeMT4 kunokuba ngumsebenzi opheleleyo. Kungenxa yesi sizathu le nto uLwazi 2 loRhwebo luye lwazisa ngeMT4 Copy Service Service kubafundi bethu. Ukubeka ngokulula, oku kuyakuvumela ukuba usuku kwaye ujike urhwebo lwe-forex nge-MT4 ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe. Endaweni yoko, uya kuba ukopa ukuthenga kunye nokuthengisa izikhundla zabathengisi bethu abanamava bathanda izinto ezinje ngohlobo oluzenzekelayo.
Funda ukuze ufumane okungakumbi malunga nendlela i-MT4 Copy Trading Service enokuthi ithathe ngayo imizamo yakho ye-forex ukuya kwinqanaba elilandelayo!
Funda iiNkonzo ezi-2 zoRhwebo lweKopi yokuThengisa
Urhwebo lwe-Forex kwi-100% yePassive Nature
Khuphela ngokuzenzekelayo iZithuba zaBarhwebi bethu beNgcali
Akukho mava aPhambili afunekayo
Beka ukuya kuthi ga kwi-20 yeeTrade Forex mihla le
Imirhumo ephantsi kwaye Rhoxisa naliphi na ixesha
Khuphela i-L2T ngoku
Funda iNkonzo yokuRhweba ngeeKopi ezi-2-Ubume
Kwindlela yayo esisiseko, i-Learn 2 Trade Copy Trading Service iya kukuvumela ukuba urhwebe nge-forex ngendlela ekhawulezileyo. Isizathu soku kukuba uyakube 'ukopa' ukuthenga kwethu kunye nokuthengisa izikhundla ezinje, ngexabiso elilinganayo noko utyale imali. Njengabathengisi abanamava kolu shishino, iqela lokuFunda u-2 loRhwebo lisebenzisa iMT4.
Eli qonga leqela lesithathu lidume kakhulu kubatyali mali abanamava- njengoko libonelela ngezixhobo ezininzi eziphambili ezingafikelelekiyo kwenye indawo. Ingxaki ephambili ye-newbies yokuzama ukusebenzisa i-MT4 kukuba iqonga linokubonakala ngathi linzima kwabo bangenalo ulwazi oluqinisekileyo lwemigaqo-siseko yokurhweba.
Ngethamsanqa, Funda i-2 yoRhwebo ngoku iyakunika ukufikelela ngokuthe ngqo kwiqela lethu labarhwebi- oko kuthetha ukuba unokukopa izikhundla zethu iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki- ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe. Oku kunokwenzeka ngoku ngokudibanisa neSignal Start - esivumela ukuba siqhagamshele iakhawunti yethu ye-MT4 nababhalisi beNkonzo yethu yokuThengisa. Kulabo abangaziyo, iSignal Start yeyabanguMyFXBooks- iqonga elaziwa kakhulu elivumela abathengisi ukuba babelane ngokungafihlisiyo kwiziphumo zabo kuluntu ngokubanzi.
Imizekelo yeNkonzo yethu yokuRhweba ngeKopi ye-MT4
INkonzo yokuFunda yokuKopa yokuKopa ye-MT2 isebenza ngendlela efanayo kwiakhawunti ye-MAM yakudala. Kungenxa yokuba uya kutyala imali yakho eyinkunzi kumrhwebi onamava onembali ekudala ikho kwindawo yokurhweba kwangaphambili. Oku kuthetha ukuba nayiphi na inzuzo eyenziwa ngumrhwebi ngokuthenga kwakhe kunye nokuthengisa izikhundla ziya kuphindwa kwiakhawunti yakho ye-MT4.
Ukuba umtsha ngokupheleleyo kulo mbono, masiqale ngomzekelo olula wendlela i-Learn 2 Trade MT4 Copy Trading Service isebenza ngayo:
Masicinge ukuba utyale imali eyi- $ 5,000 kwiNkonzo yokuThengisa yokuKopa ye-MT2
Kuyo yonke inyanga, iqela lethu labarhwebi liya kubeka iiodolo zangaphambili
Umyalelo wokuqala ubona umngcipheko womrhwebi we-1% yenkunzi yethu kwi-GBP / USD ye-oda ende. Oku kuthetha ukuba uya kuba semngciphekweni we-1% yenkunzi yakho kolu rhwebo- yiyo loo nto $ 50
Umrhwebi uvale indawo ye-GBP / USD kwiiyure ezimbalwa kamva kwinzuzo ye-5%. Ngokwendalo, uyavala indawo.
Kwisibonda sakho seedola ezingama-50- uzuze i $ 2.50
Ngoku, kukho amanqaku athile abalulekileyo ekufuneka uwaqaphele ngalo mzekelo ungasentla. Okokuqala, ukwazile ukwenza inzuzo ye-5% ngaphandle kokufuna ukwenza naluphi na uphando okanye ukubeka naziphi na iiyure zentengiso. Ngokuchasene noko, yonke into ibizenzekelayo. Okwesibini, abathengisi bethu baya kubeka izikhundla ngalo lonke usuku-ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwiirhwebo ezingama-20. Oku kuthetha ukuba ibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo ye-MT4 iya kunyuka yehle inyanga yonke.
Ngoku makhe sijonge komnye umzekelo wokuqinisekisa ukuba uyayazi ngokucacileyo indlela esebenza ngayo iMT4 Copy Trading Service.
Masithi inyanga enye idlulile okoko ubhalisele i-MT4 Copy Trading Service yethu. Utyalole imali kwasekuqaleni
$ 5,000- kodwa ibhalansi yakho ngoku ime kwi- $ 7,500
Urhwebo lokuqala lwenyanga elandelayo, umrhwebi wethu ubeka emngciphekweni i-1% yenkunzi yethu kwi-EUR / ZAMA indawo emfutshane
Oku kuthetha ukuba ubeka emngciphekweni i $ 75 kolu shishino
Esi sisikhundla sokurhweba esihlala sivulekile kangangeentsuku ezininzi. Umrhwebi ekugqibeleni uvala urhwebo ngenzuzo ye-10%
Uvala indawo-kunye ne-10% yenzuzo yakho kwi-7.50 yeedola
Njengoko ubona koku kungasentla, ngokuhambisa isicwangciso esifanayo sokulawulwa kwebhanki njengabarhwebi bethu, isikhundla sakho sonyuka njengoko ikomkhulu lakho likhula.
Isebenza njani i-MT4 Copy Service Service?
Kula macandelo angezantsi, siza kuhamba ngenkqubo yenyathelo nenyathelo yendlela i-Learn 2 Trade MT4 Copy Trading Service works. Oku kubandakanya isishwankathelo esipheleleyo sendlela ongaqala ngayo, yeyiphi imirhumo ekufuneka uyiqwalasele, kwaye zeziphi iisetingi zeMT4 ekufuneka uzenzile ukuze ufumane uninzi lwenkonzo yethu.
Qaphela: Inkonzo yokuFunda yokuThengisa ikopi yokuRhweba iyahambelana neMT2! Ukuba ukhetha ukusebenzisa iMT5 kwinkonzo yethu, unokulandela amanyathelo afanayo njengoko kuchaziwe apha ngezantsi.
Step ️ Inyathelo 1 -Vula iAkhawunti nge-MT4 Broker
Musa ukwenza impazamo ngayo-ekuphela kwendlela onokuthi uthengise ngayo nge-MT4 kukuba ube neakhawunti kunye nomthengisi okwi-intanethi ohambelana neli qela lesithathu. Kungenxa yokuba i-MT4 ihleli phakathi kwakho kunye nomrhwebi-ke eyokugqibela iyafuneka ukufikelela kwiimarike eziphambili ze-forex.
Oko kukuthi, xa ubeka iodolo ngeMT4, eneneni ngumrhwebi oqhuba urhwebo. Ukuba sele unayo iakhawunti kunye nomthengisi we-MT4, ungatsiba uye kwiNyathelo lesi-3. Ukuba ungumthengi wase-US, iLonghornFX lukhetho olukhulu.
Eyesibhozo: Umthengisi olawulwa yi-ASIC unikezela ngokusasazeka okuqinileyo kunye nemirhumo ephantsi, ecaleni kwesantya sokukhawulezisa ukwenziwa kunye nokuhlawula amatyala.
Ixesha elideFX: Ukuba ujonge umrhwebi o-MT4 okweyona nto iphambili enobungane e-US, sukujonga ngaphezulu kweLonghornFX. Njengomboneleli we-ECN, uya kufumana okona kusasazeka kukhuphiswano lufumanekayo kwiimarike ze-forex.
Njengamaxesha onke, qiniseka ukuba wenza olwakho uphando ngaphambi kokukhetha umrhwebi. Nangona kunjalo, xa sele ukhethe i-MT4 broker efanelekileyo, kuyakufuneka uvule iakhawunti. Ababoneleli abathathu badweliswe apha ngasentla bayakuvumela ukuba wenze oku kwimizuzu nje embalwa - njengoko kunjalo kwimeko yokufaka ulwazi lwakho, iinkcukacha zonxibelelwano, kunye nokukhetha igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Ukurhweba nge-CFDs kunye noKhetho lwe-FX kubandakanya umngcipheko kwaye kunokubangela ilahleko yenkunzi yakho.
Step ️ Inyathelo 2 -KYC kunye neNkxaso-mali
Ngoku ukuba uneakhawunti kunye nomthengisi we-MT4, kuya kufuneka uyilayishe ngokukhawuleza ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente. Kungenxa yokuba uya kuba ufikelela kwiimarike ze-forex zehlabathi nge-broker-ke kufuneka iqinisekise ukuba isazisi sakho siqinisekisiwe ngaphambi kokuqalisa.
Ngethamsanqa, aba bathengisi bakhankanyiweyo basebenzisa ubuchwepheshe be-KYC oluzenzekelayo- oko kuthetha ukuba ipaspoti yakho, iphepha-mvume lokuqhuba, okanye ikhadi lesazisi likazwelonke liya kuqinisekiswa kwimizuzu engaphantsi kwemibini. Nje ukuba ufumane i-imeyile eqinisekisa ukuba iakhawunti yakho iqinisekisiwe, ungafaka iimali ezithile.
Unokukhetha kwi-debit / kwikhadi letyala, ucingo lwebhanki, okanye i-e-wallet ukulungiselela le njongo. Qaphela, nangona idipozithi encinci kubathengisi abaziwayo beMT4 ijikeleze i-100 $ - Funda u-2 woRhwebo ucebisa ukongeza ubuncinci i-1,000, 4 yeedola. Oku kuyakuqinisekisa ukuba unemali eyaneleyo kwiNkonzo yethu yokuRhweba ngeKopi yeMT20- kuba abathengisi bethu bahlala bengena kwizikhundla ezingama-XNUMX ngosuku.
Nje ukuba wenze idiphozithi, ungaqhubeka nokukhuphela iqonga le-MT4 kwisixhobo sakho sedesktop- kwaye ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha owalikhethileyo xa ubhalisa nomthengisi omkhethileyo.
Step ️ Inyathelo lesi-3-Bhalisa ngeSignal Start
Kule nqanaba lokuhamba kwethu, kuya kufuneka ngoku ube neakhawunti kunye nomthengisi wakho weMT4. Inxalenye elandelayo yenkqubo ukubhalisa ngeSignal Start. Isizathu soku kukuba iSignal Start ibonelela ngetekhnoloji entsha evumela ababhalisile ukuba baxhume iakhawunti yabo ye-MT4 kwinkonzo ye-Learn 2 Trade.
Ngethamsanqa, iSignal Start iyakubiza kuphela i-25 yeedola ngenyanga kolu manyano-esinokuthi siphikisane nalo lubonelela ngexabiso elikhulu. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuba nakho ukurhweba nge-forex ngeenxa zonke ngakwimeko yokuhamba-ngaphandle kokufuna ukwenza naluphi na uphando okanye ukubeka nayiphi na iodolo yeemarike!
Step ️ Inyathelo lesi-4 - Khuphela uLwazi 2 loRhwebo
Nje ukuba ubhalise kwaye uhlawule umrhumo wakho we-25, uya kuthi emva koko ucelwe ukuba uqhagamshele iakhawunti yakho yeMT4 kwiSignal Start. Emva koko, kuya kufuneka ubhekise phambili kwiProfayile yoRhwebo lokuFunda kwiwebhusayithi yokuQala yokuSayina - onokufikelela kuyo ngokunqakraza kwikhonkco elingezantsi:
Khuphela Funda 2 Urhwebo
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Learn 2 Trade ibiza umrhumo wenyanga oyi- $ 150 ukusebenzisa i-MT4 Copy Trading Service. Le yinyuselo esiyenzayo ngoku-ke abasebenzisi ababhalisayo emva kokugqitywa baya kuhlawula imali ephezulu.
Siyakholelwa ukuba umrhumo we- $ 150 ubonelela ngexabiso elikhethekileyo lemali- ngakumbi xa ucinga ukuba uza kuthengisa ngamehlo otyalo mali lwe-forex enengxelo eqinisekisiweyo. Oko kukuthi, nje ukuba ukhethe ukukopa funda uRhwebo 2, uya kube urhweba ngentengiso ye-forex ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi.
Qaphela: Awunakuze uboshwe kubhaliso ongenakho ukuphuma kulo. Ngokuchasene noko, unokukhetha ukucima inkonzo yakho yokuFunda yokuKopa ukuRhweba nge-2 nangaliphi na ixesha.
Step ️ Inyathelo lesi-5-Qwalasela iiParameter zokuThengisa
Inxalenye yokugqibela yenkqubo kukuseta iiparameter zokuThengisa, onokuzenza ngqo kwiakhawunti yakho yeSignal Start.
Singacebisa ukuba samkele le mithetho ilandelayo:
Khuphela ukulahleka kokuyeka kwaye uthathe amaxabiso enzuzo: Ewe
Khuphela Thenga iiRhwebo: Ewe
Khuphela uthengise iiRhwebo: Ewe
Umda opheleleyo: Qala nge-max ye-0.1 de ube ukhululekile ukonyusa
Umda opheleleyo weeTengiso eziVulekileyo: Hayi
Ibhalansi Yeka: Ewe i-20% yemali kwi-akhawunti esetyenziselwa ukukopa imisebenzi yethu
Ukuyeka ukuTsala: Ubuninzi be-60% yokuvumela ukurhweba ngomsebenzi
IiLots eziLungisiweyo: (Umzekelo) KwiiRandi ezili-1000 ze-0.01 kwi-akhawunti ye- $ 10,000 yeLot
Okuphindeneyo: Cwangcisa i-0.5 esisisiqingatha seqashiso esisisebenzisayo, emva koko uzive ukhululekile ukonyuka uye kwi-1.0 de ube ukhululekile
Nje ukuba uqinisekise useto olungentla- kulungile ukuba uhambe!
Step ️ Inyathelo lesi-6-Urhwebo lwe-Forex ngokuDlulayo
Ukuba uwalandele onke la manyathelo akhankanywe apha ngasentla, ayikho enye into onokuyenza. Oko kukuthi, kuya kufuneka:
Iakhawunti exhaswa ngokupheleleyo ngumthengisi we-MT4
Khuphela i-MT4 kwisixhobo sakho sedesktop
Ubhaliswe ngokuQalisa ukuSayina kwaye uhlawule umrhumo wakho
Ikopishwe funda 2 ukuRhweba ngeSignal Start
Cwangcisa iiparameter zakho zokuKopa zoRhwebo
Ukuba kunjalo, uya kuqala kwangoko ukonwabela inkonzo yokurhweba nge-forex ngendlela ezenzekelayo! Ke ngoko, nakuphi na ukuthenga nokuthengisa izikhundla abathengisi bethu bazibeka ngokuzenzekelayo ziya kuboniswa kwiakhawunti yakho yeMT4. Ungazigcina iithebhu zeziphi izinto zorhwebo ezibekwa kwiqonga le-MT4 okanye ngokusayina kwiakhawunti yakho yomrhwebi kwi-Intanethi.
Funda ukuRhweba ngeeKopi ezi-2 nge-MT4-Pros and Cons
I-forex yorhwebo kwi-100% yendalo engabonakaliyo
Cofa kwiinkqubo zokucinga zabathengisi be-forex abanamava ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi
Zonke iiparameter zolawulo lomngcipheko zifakiwe
Ukufikelela kuma-forex angama-20 afakwe ngosuku
Rhoxisa nangaliphi na ixesha
Ayihambelani neakhawunti yedemo
Funda ukuRhweba ngeeKopi ezi-2 ngeMT4-Isigqibo
Nangona izigidi zabathengi zithengisa ngoku i-intanethi kwi-intanethi-bambalwa kakhulu abazuza ngokungaguquguqukiyo. Kungenxa yokuba ukuthengisa i-forex ngempumelelo ekuhambeni kwexesha-kuya kufuneka ubenolwazi oluqinisekileyo lohlalutyo lobuchwephesha. Kwaye-lelona qonga libalaseleyo lale njongo yi-MT4-eza izele zizixhobo eziphambili zorhwebo kunye neempawu zetshathi.
Kulapho kungena khona ukuFunda uRhwebo 2. Beka ngokulula, ngokusayinela inkonzo yethu yokuThengisa ngeKopi- ungarhweba ngokunyanisekileyo ngalo lonke ixesha losuku - kodwa ngokwentando. Kungenxa yokuba nakuphi na ukuthenga okanye ukuthengisa izikhundla apho indawo yabarhwebi bethu iya kuthi ibonakaliswe ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho yeMT4.
Njengoko igama lisitsho, uyakopa uthengise kwaye uthengise izikhundla zabarhwebi bethu abanamava ngokwendalo. Umzekelo, ukuba umrhwebi wethu ubeka umngcipheko kwi-1% yenkunzi yakhe kwi-GBP / AUD ye-odolo ende, uya kwenza okufanayo. Kananjalo, ukuba utyale imali eyi-1,000 10 kwiNkonzo yokuKopa yokuKopa, ungabeka umngcipheko kwi- $ 100 kwesi sikhundla. Oku kufezekiswa ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi-njengoko yonke into iyi-XNUMX% ngokuzenzekelayo!
Zithini iintlawulo zeMT4 Copy Service Service?
Zimbini kuphela iifizi ekufuneka uziqwalasele xa usebenzisa i-MT4 Copy Trading Service. Okokuqala, uya kucelwa ukuba uhlawule i-25 yeedola ngenyanga kwiSignal Start. Kungenxa yokuba iSignal Start ibonelela ngendawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo kubabhalisi bethu ukuba basebenzise inkonzo yethu yokukopa ye-MT4. Okulandelayo, Funda iiRhafu ezi-2 zorhwebo ngeedola ezili-150 ngenyanga ukukopa abathengisi bethu abanamava- esicinga ukuba zibonelela ngexabiso elifanelekileyo. Okona kubaluleke kakhulu, akunakulindeleka ukuba abanye ababoneleli ngeenkonzo kule ndawo, asihlawulisi sabelo sekhomishini. Kananjalo, zonke iinzuzo zakho zezakho ukuba uzigcine!
Ndifuna imali eninzi kangakanani?
Unako ukutyala naliphi na inani lokukhetha kwi-Learn 2 Trade MT4 Copy Service. Nangona kunjalo, ukufumana uninzi lwezicwangciso zethu zokurhweba, sicebisa ukufaka ubuncinci be- $ 1,000 kwiakhawunti yakho ye-MT4 broker.
Zeziphi iimarike zorhwebo ozithengisayo?
Iqela lethu labarhwebi liya kugxila ikakhulu kwizibini eziphambili ze-forex- ezinje nge-GBP / USD kunye ne-EUR / USD. Nangona kunjalo, xa ithuba livela, siyakuthengisa ngababini abancinci. Amaxesha ngamaxesha, sinokungena ekurhwebeni ngomngcipheko kwimarike yemali exotic.
Ayitsho ngaphandle ukuba zonke iindlela zokurhweba zithwala umngcipheko. Ayizukubanoxanduva kuthi ukuthi ngekhe ubeke emngciphekweni nayiphi na imali ngokusebenzisa i-MT4 Copy Trading Service yethu- njengoko injalo imeko ye-forex. Ngale nto ithethwayo, iqela lethu labarhwebi abanamava liya kungena kuphela kwizikhundla ngendlela engathandekiyo. Sikwenza oku ngokufaka ilahleko enengqondo kuzo zonke izikhundla kwaye sinamathele ngokwenkolo kwisicwangciso esibonisiweyo solawulo lwebhanki.